N'ihi mmetụta COVID-19, a gbanwere Koelnmesse biennial ka ọ bụrụ igwe okwu dijitalụ Koelnmesse. Interzum@ụlọ ga -eme site na 04. ruo 07.05.2021. Na interzum@ụlọ, ihe karịrị ụlọ ọrụ 140 sitere na mba 24 ga -eweta ngwaahịa na ọrụ ha na nyiwe dijitalụ Koelnmesse. ...
YALIS na -egosi na ngosi ngosi Canton nke 124
Nnukwu ihe ịga nke ọma maka YALIS na Canton Fair na Guangzhou ebe na -egosi nchịkọta aka ọhụrụ. Na Canton Fair na Guangzhou, ihe omume kacha mkpa na China, yana ihe karịrị ụlọ ọrụ ngosi 25500 sonyere na ya. Tupu ...
Ihe ngosi Indo Mee Teknụzụ Jakarta nke 16
Ihe ngosi Indo Build Tech Jakarta nke emere na Mee 2 ruo Mee 6 na ICE (Ihe ngosi Mgbakọ Indonesia) YALIS bịakwara ihe ngosi a. Nke kachasị na Indo Build Tech Event Series na ụlọ na -eduga & int ...
Ihe na Interzum 2019
N'ọnwa Ọgọstụ 2019, ndị otu YALIS gara Interzum Fair na Cologne, Germany. Dị ka anyị niile maara, Interzum bụ ụlọ ahịa azụmaahịa kachasị n'ụwa maka imepụta arịa ụlọ na ime ụlọ. Anyị na -atụ anya ịgbasawanye ahịa Europe na mpaghara. ...